Ati Karaa Gooftaa Badhaadhaa – Araratv
Home > Press > Barsiisa > Ati Karaa Gooftaa Badhaadhaa
Ati Karaa Gooftaa Badhaadhaa
2Qor. 8:9 “Isinoo gaarummaa gooftaan keenya Yesus Kristos ayyaana isaatiin isiniif kenne hubattaniittu; inni badhaadhaa utuma jiruu deegaa ta’uu isaatiin isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta’e.”
Isin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta’e.
Nuun badhaasuudhaaf yookaan soorumsuudhaaf ofiisaatii deegaa ta’ee argame.
Sababiinsaa kiristiyaanummaan ofiif jiraachuu miti; namaaf jiraachuudha.
Filp. 2¯¯¯¯¯⁴ Isin kessaa adda addaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee, waan isatti tolu duwwaa hin ilaaliin! ⁵ Yaada garaa isa Kristos Yesus qaba ture qabaadhaa! ⁶ Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu, ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. ⁷ Inni ulfina sana gad dhiisee, akka waan, waan tokkotti hin galle of godhe; bifa garbummaa in fudhate; fakkaattii namummaatiin in dhalate, waan hundumaanis nama ta’ee argame.
Waaqarraa gadi bu’ee waaqni nama ta’e.
Ulfina Waaqummaa dhiisee bifa garbummaa uffatee nama wayitti hingalle of godhe.
Isa. 53¯¯¯¯² Inni akka biqiltuu mukaatti goofticha duratti ol in ba’a, akka hidda mukaa isa lafa gogaa keessaa ba’uus in ta’a; simboodhaa fi surraa waan hin qabneef, nuyi isa ilaaluu hin jaallanne; miidhagummaa waan hin qabneefis nu hin mararre; ³ namoonni isa tuffatanii isa irraa in goran, inni nama dhiphinnii fi muddamni itti baay’ate ture; inni akka nama tuffatanii, achi ilaalanii bira darbanii in ta’e; nuyis homaatti iyyuu isa hin lakkoofne.
Anaafi isin baddhaasuudhaaf, furuudhaaf, hiikuudhaaf akkas of godhe.
Utuu gatii hinbaasiin (aarsaa hin kaffaliin); gatii namarraa baasuun waan hindanda’amneef; aarsaa kana hundumaa kaffale jechuudha.
Ilma namaa badhaasuuf jecha biyya lafaa kanarratti gatii guuddaa baasee jooraa of godhe.
Mat. 8:20 “Yesus immoo, “Waangonni boolla qabu, simbirroonnis mann’ee qabu, ilmi namaa garuu lafa mataa isaa itti hirkifatu hin qabu” jedheen.”
Ofii miidhamee jireenya isa hinmul’anne ijaaraa, hojjechaa ture.
Gooftichi kan dhufeefi hoolonni jireenya irraa hafaa akka jiraataniifidha.
Yoh. 10:10 “Hattuun, waan biraaf utuu hin ta’in, hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaafis in dhufti; ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif, irraa hafaas haa qabaataniif dhufeera” jedhe.”
Yesuus Maal Nu Badhaase?
1. Eebba Waaqarraatiin
Eebba waaqarraa kan jennu kun Hafuurasaati (Ayyaanaasaati)
Namoota biyya lafaa kanarratti dagatamoo, gatamoo ta’an waame.
1Qor. 1¯¯¯¯²⁶ Obboloota ko! Isin yeroo waamamtan, namoota attamii akka taatan of irratti ilaalaa! Akka yaada namaatti baay’een keessan ogeessota miti; baay’een keessan beekamoo miti; baay’een keessanis sanyii warra gurguddaa keessaa miti. ²⁷ Waaqayyo garuu namoota ogeessota yeellaasisuudhaaf, waan biyyi lafaa gowwaatti lakkaa’u fo’ate; Waaqayyo warra jaboo yeellaasisuudhaaf waan biyyi lafaa dadhabaatti lakkaa’u fo’ate. ²⁸ Waaqayyo Wanta jira jedhamu lafatti dabaluudhaaf, wanta jira hin jedhamne, wanta biyya lafaatti gad deebi’aatti lakkaa’amuu fi wanta tuffatamaa fo’ate. ²⁹ Kanaafis namni tokko illee fuula Waaqayyoo duratti of hin jajin. ³⁰ Kristos Yesuitti jiraachuun keessan Waaqayyo biraa ta’e; Waaqayyo Kristosin ogummaa keenya nuuf godhe. Isumaan qajeelota taanee, Waaqayyoof qulqulloofnee in furamna.
Ayyaanasaa isa gatii jabeessa nu badhaase.
Efe. 1:3 “Waaqayyoof, abbaa gooftaa, keenyaa Yesus Kristos isa karaa Kristos eebba hafuuraa hundumaan, waan waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta’u!”
Gooftichi hidhaa seexanaarraa kan nu hikeef, biyya lafaa isa dukkanaa’aa keessaa kan nu waameef; waan waaqaraatiin nu badhaasuudhaafidha.
Yaq. 2:5 “Yaa obboloota ko jaallatamoo, dhaggeeffadhaa! Waaqayyo akka isaan amantiitti sooromaniif, mootummaa isaa isa inni warra isa jaallatan abdachiisettis akka galaniif, namoota biyya lafaa duratti hiyyeessota warra ta’an fo’ate mitii ree?”
2. Fayyaa Nu Badhaase
Hattichi nu jiraachisuuf hindhufne; hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf, diiguudhafis dhufe; Yesuus garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif, irraa hafaas haa qabaataniif dhufe.
Fayyaan eebba Waaqayyooti.
Madaa’uusaatiinis fayyinni nuuf in argame.
Isa. 53¯¯¯¯⁴ Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya of irra in kaa’e, muddama keenyas in baate; nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha’icha isatti fidee, akka waan inni isa rukutee gad isa deebisettis in lakkoofne. ⁵ Inni garuu balleessaa keenyaaf in waraaname, sababii yakka keenyaafis reebamee in caccabsame; nuyi nagaa akka argannuuf inni in adabame, madaa’uu isaatiinis fayyinni nuuf in argame.
Nuyi fayyaatti akka jirannuuf inni nuuf dhukkubsate; nuyi jireenya akka argannuuf inni nuuf miidhame.
3Yoh. 1:2 “Yaa michuu ko! Akkuma karaa lubbuu sitti tole, karaa hundumaan akka sitti tolu, akka ati fayyaa taatus nan kadhadha.”
3. Waan Hundumaan Nu Eebbiseera
Isa namni namaa kennuu hindandeenye lubbuusaa erga nuuf kennee; waan hundumaa ilmasaa Yesuus Kiristoos wajjin tola nuuf kenneera.
Rom. 8:32 “Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kennee, waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuu ree?”
Ilmasaa wajjin eebba hundumaa nuuf kenneera.
Far. 112:3 “Badhaadhummaa fi soorumni mana isaa keessa jira, qajeelummaan isaas yeroo hundumaaf jabaatee in dhaabata.”
Far. 24:1 “Lafichi, wanti laficha guutes hundinuu kan Waaqayyoo ti, biyyi lafaa fi warri isa keessa jiraatanis kan isaa ti;”
Akkuma inni ofiisaatii dheegaa ta’e nu badhaase; nuyis namootaaf jiraachuun nurra jira.
2Qor. 9:11 “Waan hundumaatti akka arjoomtaniifis karaa hundumaa isinin badhaasa; arjummaa keessan isa nu harkaa fudhattaniif immoo namoonni baay’een Waaqayyoof galata in galchu.”
“… akka warra deeganiitti in lakkaa’amna, garuu namoota baay’ee in sooromsina; …” jedha Phaawulos.
2Qor. 6¯¯¯¯⁸ ulfinaan salphinaanis, maqaa baduudhaan, maqaa toluudhaanis, akka gowwoomsituutti ilaalamuudhaan, dhugaa qabaachuudhaanis in deddeebina. ⁹ Utuma beekamnee jirruu akka warra hin beekaminii taane; akka warra du’aniitti in lakkaa’amna, nuyi garuu kunoo, in jiraanna! Akka warra adabamanii taane, garuu hin ajjeefamne, ¹⁰ Akka warra gaddaniitti in ilaalamna, garuu nuyi yeroo hundumaa in gammanna; akka warra deeganiitti in lakkaa’amna, garuu namoota baay’ee in sooromsina; akka warra homaa hin qabneetti in ilaalamna, garuu waan hundumaa qabna.
Laphee Ittiin Gara…